नवरस साकोसमा नयाँ संचालक समिति
समाचार | 2021-11-30 Share
काठमाडौं । नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नयाँ संचालक समिति निर्वाचित भएको छ ।
संस्थाको मंगसिर ३ गते सम्मपन्न १४ औं वार्षिक साधारण सभाले शिवहरी पौडेलको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय संचालक समिति निर्वाचित गरेको हो ।
समितिको अपाध्यक्षमा सुजता कुमारी श्रेष्ठ, सचिवमा उत्तम पुरुष दाहाल र कोषाध्यक्षमा रणजीत कुमार पोदार चयन हुनुभएको छ ।
सदस्यहरुमा उपेन्द्र बडाल, श्याम प्रसाद पन्त र कृष्ण बहादुर भट्टराई चयन हुनुभएको छ ।
यसैगरी सभाले संगीता कक्षपतिको संयोजकत्वमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति चयन गरेको छ । लेखा समितिको सदस्यमा किशोर कुमार थापा र कृष्ण प्रसाद सुबेदीलाई चयन गरेको छ ।
साधारणसभाका अवसरमा एसईईदेखि डाक्टर, ईन्जिनियरसम्म सम्मानित भएका छन् । डा. सरोज पन्त, डा. अनिता सापकोटा, ई. सुरेश पन्त सम्मानित हुनुभएको छ । गत वर्ष एसईईदेखि स्नाकोत्तर गरेकालाई संस्थाले सम्मान गरेको थियो ।
स्नातक गरेका दीक्षा श्रेष्ठ, सुलभ खत्री, सुजिता थपलिया, सञ्जय पाण्डे सम्मानित हुनुभएको छ । एसईईमा सुमी थापा मगर, विशेष सुवेदी, रमण देसारलाई सम्मान गरिएको थियो । संस्थाले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा अम्बिका पौडेल र उत्कृष्ट कर्मचारीकारुपमा सुमन कोइराला, सुस्मिता पोखरेल, दीक्षा अमात्यलाई सम्मानित गरेको छ ।
संस्थाले ज्येष्ठ सदस्य, मासिक बचत सदस्य र उत्कृष्ट व्यवसायी कारोबार सदस्यलाई सम्मान गरेको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक सरिता भट्टराई तिमल्सिनाले उत्कृष्ट कर्मचारी तथा सदस्यलाई सम्मान प्रदान गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष केशव कोइरालाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संस्थाको सेयर पुँजी ३ करोड ६२ लाख ९१ ह्जार रहेको जानकारी दिनुभयो । संस्थाले २७ करोड ११ लाख ८३ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ बचत संकलन गरी २२ करोड ९६ लाख ७४ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको जनाउनुभयो ।
देवदर्शन सहकारीको तेह्रौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारीको चौधौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
अदालतको अन्तरिम आदेशः ‘बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको साधारण सभा नगर्नु’
बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको साधारण सभा पुस २९ गते हुने !
निजी स्वार्थ पुरा गर्न सहकारी ऐन संशोधन हुँदैनः मन्त्री श्रेष्ठ
श्री भैरवी बहुउद्देश्यीयले राज्यलाई साढे नौ लाख राजश्व बुझायो